SKU: Ama-60 TV NYE amabala Isigaba: Ukukhangisa
Lezi zinto eziphezulu ze-VJ Drop zisiza ukuletha unyaka omusha kahle! Iphelele ukudala i-hype ngaphambi kwewashi le-12. Konke okukhulunywe ngokucacile futhi okukhiqizwa, nehluzo ukuhamba. Ungadonsa ibhola, yakha i-hype. Yenza lokhu kulo nyaka ngalezi zinhlanzi eziphezulu ze-VJ!
I-DJ Video Loop One (i-Ocean)
Ungakheli isikrini esimnyama phakathi nesethi yakho! Ngisho noma ungenayo ividiyo yoma ingoma ethile, usengaba nezithombe ezihlabayo ukuze uqhubeke uhamba. Okungcono okwamanje, yenze kube yiyodwa yevidiyo yethu ye-DJ, okwenziwe ngegama lakho. Qinisekisa umkhiqizo wakho futhi ugweme ukuba abantu bacabange ukuthi isethi yakho iphelile ngoba isikrini sivaliwe. Amathegi womsindo nemibhede yomculo ayatholakala nale vidiyo, xhumana nathi ukuze uthole imininingwane.
I-Club iphefumulelwe i-DJ video drop, equkethe ama-disco balls kanye nemiphumela ye-mirror. Igama lakho libonakala likhulu futhi liphethe ngakho-ke akukho muntu ozolilahleka. Yenza ngokwezifiso imibhede yomculo yomsindo xhumana nathi ukuze uthole imininingwane.
I-riveting, umkhawulo wesihlalo sakho uzizwa yenza le vidiyo ye-DJ ihle kakhulu ngokuqala isethi yakho. Umbhalo amaningi wembula kukuvumela ukwakha idrama nokumiswa okwesikhashana ngaphambi kokudalula igama lakho.
Ungakheli isikrini esimnyama phakathi nesethi yakho! Ngisho noma ungenayo ividiyo yoma ingoma ethile, usengaba nezithombe ezihlabayo ukuze uqhubeke uhamba. Okungcono okwamanje, yenze kube yiyodwa yevidiyo yethu ye-DJ, okwenziwe ngegama lakho. Qinisekisa umkhiqizo wakho futhi ugweme ukuba abantu bacabange ukuthi isethi yakho iphelile ngoba isikrini sivaliwe. Amathegi womsindo nemibhede yomculo ayatholakala nale vidiyo, xhumana nathi ngemininingwane.
I-Combo - Noma yimaphi amavidiyo we-4
Khetha noma yikuphi amavidiyo we-4 DJ Intro okumelwe afakwe nge-logo yakho kanye namathegi alalelwayo aqukethe igama lakho le-DJ! Gcina iqoqo lakho lihlanzekile njalo uma uphendulela nale arsenal ye-HD DJ intros ukuthi isixuku siyakuthanda.
Iwebhusayithi Yokubhalisa Iphakheji - Isayithi Lokuqala
Ikhasi lokungena kwe-Scroll ngolwazi lokuxhumana Domain ukuthenga nokuvuselela Ukubamba ngokuqapha Ideskithophu ephendulayo kanye nesayithi leselula Ukuqukethwe nokubuyekezwa kwezithombe (Kuze ku-30 ...
DJ Video Loop - Ilogo Shatter